संसद विघटनबारे फैसला सुनाउन अदालतलाई केही साता लाग्ने -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष ०८, २०७७ समय: २०:०९:४७
क-कसले हेर्नेछन् महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा ?
काठमाडौं । ओली सरकारले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा चढेको खबर पाउनासाथ बुधबार धेरै मानिसहरुले प्रश्न गरे-आजै फैसला आउन लाग्या हो कि क्या हो ?
विज्ञहरुका अनुसार संसद विघटनका रिटहरुमाथि शुक्रबार नै संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउन सक्दैन । बुधबार भएको रिटमाथिको बहसमा सहभागी एक कानूनविदले भने, ‘शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु हुन्छ । अदालतले त्यस दिन विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिन्छ ।